UYILO LWEGUMBI LOKULALA IINGCAMANGO (IMIFANEKISO YOYILO) - UYILO LWEGUMBI LOKULALA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokulala Uyilo lwegumbi lokulala Iingcamango (Imifanekiso yoyilo)
Uyilo lwegumbi lokulala Iingcamango (Imifanekiso yoyilo)
Makhe sijonge ezinye zeengcamango ezithandwa kakhulu kwigumbi lokulala. Ukucwangciswa kwesithuba yinto ephambili ephambili yoyilo lobungcali. Idollvet ye-ultra-luxe eyi- $ 500 ayizukubaluleka ukuba indawo yakho ayicwangciswanga kakuhle. Uyilo, okanye ukucwangciswa kwendawo, kwigumbi lakho lokulala yeyona nto ibalulekileyo kuyilo lwakho. Iya kunyanzelisa ukuba ihambe njani indawo yakho kwaye inokubonisa uyilo lwakho ngobuhle ngendlela ekholisayo. Apha ngezantsi kukho iindlela ezahlukeneyo zefanitshala zokulala ukukunceda wandise indawo yakho kwaye uyile uyilo oluhle oluthandekayo.
Nokuba indawo yakho inkulu okanye incinci, ubeko olufanelekileyo lungenza umahluko kwindlela obona ngayo kwaye usebenzise indawo yakho. Uninzi lwamagumbi okulala enzelwe ukuba nodonga lokulala kodwa oko akuthethi ukuba kukuphela kwendawo ebekwa kuyo ibhedi yakho, ngobuchule obuncinci bokuyila kunye nemigaqo yoyilo, ungathatha imicimbi ezandleni zakho kwaye wenze uyilo lwegumbi lakho lokulala amaphupha.
izipho zokuzalwa zokuyilwa komyeni
Iingcebiso zokuyilwa kwegumbi lokulala
Layout Suite Suite Ubeko
Ubeko lwefanitshala egumbini lokulala
Ubume obuncinci bokulala
Ubume beGumbi lokulala elincinci
Uyilo lwegumbi lokulala Amagumbi asikwere
Igumbi lokulala eligcinwe
Ukuphumla Ubeko lokulala
Ubeko lokulala olwahlukeneyo
Nokuba ubungakanani kwigumbi lakho lokulala, ufuna ukugcina indawo yakho yezithuthi ivulekile, wandise umbono wakho, vumela ukukhanya kwendalo okuninzi kunye nokungenisa umoya, kwaye ugcine ubumfihlo bakho. Ingcebiso yepro: yenza isicwangciso esincinci somgangatho wakho, yenza isantya esikhawulezayo sokuzoba indawo yakho, wenze umzobo owahlukileyo wefanitshala yakho kwaye usike imizobo yefanitshala.
Ngoku ungadlala ngolungiselelo ngokuhambisa ifanitshala ujikeleze umzobo wegumbi lakho. Ukubeka ibhedi yakho embindini wodonga kwaye uyijikeleze ngeetafile ezisecaleni kwebhedi kuyinto yesiko kwaye isebenza kwiindawo ezininzi, kodwa ayisiyiyo kuphela indlela!
I-symmetry yinto esiyibonayo rhoqo xa sijonga ukubekwa ebhedini, kodwa akukho mthetho othi kufuneka ulingane endaweni yakho! Musa ukoyika ukutyhala ibhedi yakho kwelinye icala, wamkele i-asymmetry. Isitshixo kukulinganisela. Ukuba utyhala ibhedi yakho kufutshane nodonga, qiniseka ukushiya igumbi elaneleyo ukuze ungene kakuhle kwaye uphume ebhedini kweli cala, ngakumbi ukuba wabelana ngendawo nomnye umntu. (Ndwendwela eli phepha ukuze ufunde ngakumbi malunga ubungakanani beebhedi kubandakanya imilinganiselo ethandwa kakhulu iintlobo zeebhedi .)
Kwicala elikufutshane eludongeni, phuma etafileni iyonke kwaye ukhethe ishelfthi engafakwanga eludongeni engafakwanga kwaye ubeke ukutya okuthandayo ngexesha lokulala kwikholamu eyodwa yobugcisa beencwadi. Kwelinye icala, beka itafile yakho esecaleni kwebhedi okanye itafile yesofa encinci enokuthi iphindwe kabini njengento yento engento. Yizise kunye kunye nombhoxo wendawo olula phantse udonga ukuya eludongeni.
Isibhakabhaka ngumda xa une-master suite. Ngamanye amaxesha ezo ndawo zinkulu, zingenanto zinokoyikisa, ngakumbi ukuba awunayo ifenitshala yokuzizalisa! Kodwa ungoyiki, abayili abanesibindi, sikugubungele!
Ukuba i-master suite yakho iza nekhabethe enkulu, yisebenzise ngokufaka inkqubo yombutho wekhabhathi eya kuthi ibambe zonke iimpahla zakho kunye nezinye izinto. Oku kuyakukhulula igumbi kwigumbi lakho lecavernous lokuphumla okuphumlayo ngaphandle kokuxinana kwezinto eziyimfuneko zemihla ngemihla.
Yiya phambili kwaye ufumane loo bhedi yobukhosi obutofotofo, nokuba liqonga elincinci okanye iposta ezine zomthi oqinileyo, unegumbi lokuhlala likhulu! Beka ibhedi kanye embindini wodonga lwakho lwebhedi, jonga iitafile ezisecaleni kwebhedi ezihambelana nesikali kodwa udibanise imilo, yenze ibe yinto enomdla, yenze ibe yeyakho.
Ngenxa yombutho wakho wekhabethe omangalisayo, awudingi mpahla yokunxiba kwindawo yakho. Cinga ngendlela onqwenela ukusebenzisa ngayo indawo yakho eyongezelelweyo. Mhlawumbi ufuna indawo yokucamngca ekoneni okanye indawo ethe cwaka yokufunda okanye ukunitha. Ngenxa yokuba unendawo kwaye sele ubekwe ebhedini, unokufumana ubuchule bokusebenzisa lonke igumbi lakho lokulala.
Yenza indawo entle yencoko kwi-master suite yakho. Beka ezimbini izitulo eziphakanyisiweyo okanye isitulo esinye sokuphumla, itheyibhile enamaxesha athile, ibhasikithi eyolukiweyo yokubamba ingubo eyongezelelweyo okanye ezimbini kwikona yegumbi lakho, kwaye unendawo yokuphumla, yokuphumla ebuyela ngqo kwigumbi lakho lenkosi.
Ukuba uyayithanda ikofu njengam, cinga nge-sleek esembindini wenkulungwane yokuguqula ukufihla ifriji encinci kunye nomenzi wakho wekhofi owuthandayo. Kuza kubakho indawo eninzi yeekomityi zekofu kunye neenkamba kwaye akukho mntu uya kuba nobulumko! Umphezulu uya kwenza indawo efanelekileyo yokufika kwizibane ezide kwaye ezo zinto zibukekayo etafileni kufuneka ususe kwigumbi lokuhlala xa unabantwana!
Beka isipili esikhulu, esiqingqiweyo eludongeni emva kwaso ukwandisa ukukhanya kwendalo okuza kwindawo yakho. Oku kungabekwa ngaphesheya kwebhedi yakho okanye eludongeni ecaleni kwebhedi yakho ke kuya kufuneka ukhubeke iinyawo ezimbalwa ngaphambi kokuba uthethe ikofu, ikofu, uvuyo, uvuyo.
Izipho zeminyaka eli-11 zakhe
Musa ukuvumela nabani na ukuba akuxelele ukuba izinto ezinobungakanani kwigumbi lokulala, azilunganga kwaphela! Unokuba negumbi elinobunkunkqele, elinesitayile, nelicwangciswe kakuhle ukuba unesakhiwo esifanelekileyo! Ewe, mhlawumbi ubungakanani beebhedi ubalulekile, awuyi kudala nantoni na ngaphandle kokungxama xa unyanzelisa ubhedu obukhulu benkosi kwigumbi lesitampu. Indawo yayo yonke into nayo yonke into esendaweni yayo, njengoko isitsho intetho, yenza uyilo olukhulu.
Yenza nkulu indawo yokugcina kwigumbi elincinci ngokongeza eshelufini eseludongeni apho ibhedi yakho iya kuqhubeka khona, usebenzisa iidrowa ezantsi kwisiseko macala omabini ebhedi yakho. Faka ukukhanya okuxhonywe eludongeni ngapha nangapha kwebhedi, yongeza umzobo kwisithuba esingentla, kwaye unendawo yokugcina enesitayile kwaye ukhulule indawo yakho yomgangatho ngokunciphisa isidingo sabanxibi abahlukeneyo. Oku akubeki kuphela kuyo yonke into oyisebenzisayo kwelinye icala legumbi, ukwenza ukusetyenziswa ngokukuko kokufanelekileyo, kukwenza igumbi lakho libonakale likhulu, kwaye kunika imvakalelo evulekileyo ngakumbi, yomoya.
Kwigumbi lokulala elincinci leendwendwe kunokutyhala ibhedi eludongeni olunye ukunika inkohliso yendawo engakumbi zama ukushiya i-aisle ukuya kwelinye icala lebhedi eliya kuphucula ukuhamba kwegumbi. Ayizukuphela nje ukuba iindwendwe ziya kuba nakho ukungena ebhedini ngokulula, iya kuvumela nendawo yama-nightstands kumacala omabini. Elinye icebo lokulala elincinci kukusebenzisa ifenitshala enye kuphela eludongeni. Oku kuya kunceda indawo ingaziva ixineke kakhulu.
Ukongeza, cinga ngeendlela zokuqaqambisa indawo. Imibala ekhanyayo ibonakalisa ngakumbi ukukhanya, khetha iphalethi ekhanyayo nengathathi hlangothi yamagumbi amancinci. Ukongeza isibuko esincinci kunokuba nefuthe elikhulu ekwenzeni igumbi liziva likhulu. Ukulungiselela ukutshiza, zama ukufaka amakhethini amhlophe amade ukuthambisa ilanga ngqo ngelixa ugcina izinto ziqaqambile. Ayizukudala kuphela imeko yothando n kwigumbi lakho lokulala elincinci, liya kujongeka limema kwaye likhulu kwinkqubo.
Okokugqibela, kunokuba ngumbono olungileyo ukuqaphela i- indawo yokugcina ibhedi kwigumbi elincinci. Kukho iibhedi ezahlukeneyo ezifana neebhedi zemurphy, iibhedi zasemini, iibhedi zebhedi, iibhedi ezisongekileyo kunye nokukhupha iibhedi ezinokukunika igumbi elininzi lokusebenza. Ezi ntlobo zisebenza kakuhle kwabo bafuna igumbi elinemisebenzi emininzi njengeofisi yexeshana okanye igumbi lokudlala.
Yintsimbi ukuba isikwere, inene, yiyo! Igumbi lokulala elisisikwele licela ngokungqinelana, likwacenga umbhoxo omkhulu, omiselweyo ukuze imise ifanitshala. Qala ngombhoxo, ukuba uhlahlo-lwabiwo mali lilinganiselwe, jonga iirug zendalo ezinje ngejute okanye ingca yolwandle, azibizi kakhulu, zihlala ixesha elide ngokumangalisayo, kwaye zinokukhanya kwendalo okuzisa ngaphandle. Fumana ityali eya kuthi yande iye malunga ne-6 ukuya kwi-12 Ukusuka ezindongeni.
Qala ngetafile yakho esecaleni kwebhedi, uyibeke ukuze isondele kwikona. Emva koko beka ibhedi yakho kunye nenye itafile esecaleni kwebhedi. Yongeza isitulo kwikona kunye nesibane somgangatho emva kwayo. Ngapha kwebhedi, unokubeka isinxibo sakho kunye nesinye isitulo kufutshane nekona. Udonga olunefestile kufuneka lujongane kwicala elinye lebhedi yakho, ukuvumela ukukhanya kwendalo kunye nomoya opholileyo opholileyo, ungaphazanyiswa, ungene egumbini.
Ubume begumbi lokulala bunokuba yinkohliso kuba kuninzi ekufuneka kuthathelwe ingqalelo. Kodwa phumla, uyilo kufuneka lube mnandi, hayi uxinzelelo! Cinga ngendlela ofuna ukuyisebenzisa ngayo indawo yakho, yintoni ekufuneka ingene emajukujukwini, yenza imizobo embalwa ekhawulezayo yamathuba obeko, kwaye usebenzise ubuqili bezorhwebo ozifundileyo namhlanje ukwenza igumbi lokulala elisebenzayo, elihle nelomntu.
Kukho iindlela ezahlukeneyo zokuyilwa kwegumbi lokulala kwiindidi ezahlukeneyo zamagumbi. Apha ngezantsi uyakufumana uyilo lwegumbi lokulala elinendawo yokugcina, igumbi lokulala elincinci, igumbi lokuphumla kunye noyilo lwegumbi lokulala eliguqukayo.
Igumbi lokulala eligciniweyo lilungele abo banenani elincinci lezinyawo emakhayeni abo, ezinje ngezo zifunyanwa kumagumbi amaninzi nakwiikhondomu. Igumbi lokulala elinokugcinwa linokwandiswa ngenjongo ngokusebenzisa indawo yokugcina ibhedi efumaneka kwiindidi zebhedi zeqonga. Kukwacetyiswa ukuba nabanxibi abaninzi ukubonelela ngamathuba ongezelelweyo okugcina.
Ukufezekisa uyilo olupholileyo lokulala cinga ngokongeza ibhedi etyebileyo okanye ibhentshi kunyawo lombhede. Ayizukuphela le fenitshala inokukunceda ukuba utshatise kwaye ugxininise iiprinta kunye nemigca kuyilo lwakho lokulala inokubonelela ngendawo yokugcina eyongezelelweyo okanye indawo nje yokubeka izihlangu zakho. Iibhentshi zebhedi ziza kuzo zonke iintlobo zezitayile ezinje ngeMid-Century Modern, iPhondo laseFrance, iChinoiserie, iCottage, okanye iHollywood Regency.
Ukuba kukho igumbi ungongeza ezinye izitulo ezintle kunye netafile encinci ukuze ube yindawo yekofu yakho yasekuseni, i-nook yokufunda kwikona yegumbi okanye indawo nje yokunxulumana nezinye zakho ezibalulekileyo.
Ukuba ufuna ukusebenzisa igumbi lakho lokulala njengendawo enemisebenzi emininzi uyilo olwenziwayo lunokulungela wena. Kumfanekiso ongentla kwebhedi ibekwe eludongeni ngenxa yewindow enkulu enokuthintela ibhedi ukuba ibekwe embindini wegumbi.
Uyilo lwegumbi lokulala elinemisebenzi emininzi linokusetyenziswa njengeofisi kunye negumbi lokulala elinedesika emiswe ngaphaya kwebhedi. Inokuba nendawo yokuhlala kunye netafile yokuphumla kunye nokonwabela ikofu, okanye inokuba nodonga olunikezelwe kwinto yokuhombisa okanye kwiikhabhathi zokugcina ezongezelelweyo. Uyilo lwegumbi eliguqukayo luyafana noyilo lwe studio kwigumbi elisebenza imisebenzi ngaphandle kokulala nje.
Nanku umzekeliso oluncedo wezinye zeendawo zokulala ezithandwayo.
Intyatyambo intombazana encinci izihlangu zendlovu
Amagumbi okulala aphezulu - Iingcamango zokulala zangasese - Iingcamango zokulala zeFeng Shui
uthando olomeleleyo ucaphula kuye
indlela yokujongana nezimemo zomtshato
iingoma awuzidlali emtshatweni
ukunxiba ntoni ekuweni komtshato madoda